Kalfadhiga Afaraad Ee Aqalka Sare Oo 35 Maalin Oo Uu U Xirnaa Duruufo Amni Maanta Furmaya – Kalfadhi
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kalfadhigiisii afaraad u furmayaa maanta, kadib 35 maalmood oo uu dib uga dhacay waqtigii uu kutalagalku ahaa inuu furmo, oo ku beegneed 10-ka bishii hore ee Sebteembar. Senetar Xuseen Sh. Maxamuud oo ah xoghayaha Guddiga Dib u Eegista Dastuurka ee Labada Gole, ayaa u sheegay Kalfadhi in la xaliyey dhammaan sababihii keenay inuu waqtigiisii ku furmi waayo kalfadhiga Aqalka Sare, waxaana ugu muhiimsanaa ammaan darri uu Guddiga Joogtada ee Aqalka Sare sheegay inuu halis ku yahay inuu Goluhu shaqadiisa ku wato xaruntiisa.
“Dhawr mar ayaa naloo soo sheegay in Xarunta Aqalka Sare lasoo weeraraayo, oo halis ammaan ayaan dareenay, AMISOM-na maadaama ay xarumaha dowladda iyadu ilaaliso ayaan u dalbanay, waana laga soo jawaabay oo dhammaan gudaha iyo hareeraha xarunta Aqalka Sare ayaa la keenay AMISOM, oo hubiysay amaanka, difaacyo ay ammaankooda iyo kan xarunta ku sugayaan ayey dhigeen, meeshaasna waxaa ku dhamaatay sababihii keenay inuu Goluhu shaqadiisa wadan kari waayo” ayuu yiri Senatar Xuseen Sh. Maxamuud, oo la hadlay Kalfadhi.
Senatar Axmed Xaashi, oo ka tirsan Guddiga Difaaca iyo Amniga Golaha ayaa isna u sheegay Kalfadhi in tirada ciidamada NISA ee markii hore ilaalineysa xarunta Golaha ay aad u yaraayeen, haddana ay yihiin kuwa guur-guura, sida uu hadalka u dhigay,, “ oo waxay ahaayeen” buu yiri “kuwa aan leysku haleyn karin”. “Sidaas oo ay tahay, ciidanka NISA iyagaa dhahayey innagaa ku filan ammaanka Aqalka Sare, oo inagaa dhinac walba ka xigna” ayuu Senatar Axmed u sheegay Kalfadhi.
Guddiga Joogtada ah ee Aqalka Sare ayaa 8-dii bishaan ku dhawaaqay inuu Goluhu Kalfadhigiisa Afaraad fadhiisanayo 15-ka Oktoobar, oo maanta ku beegan, kaddib markii uu Goluhu ka arrinsaday go’aankaas, balase wax faahfaahin ah ma bixin. Hase ahaatee, sababaha dib u dhaca Kalfadhigaas waxaan rumeysneen Senataro ku jira Golaha, kuwaas oo u arka in arrinta ammaan darrida ah ee keentay dib u dhaca ay tahay mid siyaasadeysan.
Senatar Jawaahir Axmed Cilmi ayaa u sheegtay Kalfadhi in sharuud uga dhigista shaqada Aqalka Sare in AMISOM lagu wareejiyo ammaanka Xarunta Golaha ay u aqbaleen si aysan shacabku u dareemin iney isqilaafeen xubnaha Aqalka Sare, balse xubno ay ka mid tahay ay rumeysan yihiin ineysan jirin sababo ammaan oo ay shaqadooda ugu wadan kari waayeen xarunta Aqalka Sare, si la mid ah sidii ay ku shaqeynayeen sanadkii hore.
“Ammaan darri aan shaqadeena la wadan weynay markii horaba ma jirin, haddana ma qabno, laakiin markii dad naga mid ah ay ku cawdeen in xarumaha kale ee dowladda ay AMISOM ilaaliso ayaa arrintaas lagu qaatay, oo kuma aynaan kala jabi karin” ayey tiri Senatar Jawaahir Axmed Cilmi, oo ka tirsan Guddiga Arrimaha Gudaha Dib u Hishiisiinta iyo Xiriirka Dowlad Gobolleedyada ee Aqalka Sare. “In AMISOM la keenay Xarunta Aqalka Sare, oo ay ammaan noo siyaadineyso ma aaminsani” ayey Senatar Jawaahir raacisay hadalkeeda.
Senatar Axmed Xaashi ayaa rumeysan inuu welwelka dhinaca ammaanka ee Xarunta Golaha Aqalka Sare sax ahaa, oo in laga soo jawaabana ay ay sharci ahayd. “Walaaca ay Senataradu ka qabeen ammaanka xarunta wax jira ayey ahayd, waana muuqatay. Hadda AMISOM sida ay u hagaajisay ammaanka Golaha wey muuqataa, difaacyada ay dhigeenna wax weyn ayey ka bedeshay ammaanka” ayuu yiri Senatar Axmed Xaashi, oo ka mid ah Xubnaha u ololeeynayey in ammaanka xarunta loo gacan geliyo AMISOM.
Senatar Xuseen Sh. Maxamuud ayaa u sheegay Kalfadhi in sababta uu Goluhu u go’aansaday inuu u joojiyo shaqada ilaa laga soo jawaabayo codsigooda ah in ammaanka xarunta Golaha lagu wareejiyo AMISOM ay timid markii muddo sanad ah laga soo jawaabi waayey baaqooda. Hase ahaatee, Senatar Jawaahir ayaa qabta in tirada xubnaha aragtidaas qabtay ay u aragto iney ku hinaaseen in cidda sugeysa ammaanka xarumaha golayaasha kale ay yihiin AMISOM ee aysan jirin Ammaan darri keentay inuu goluhu shaqadiisa u wadan kari waayo sidii Kalfadhigii hore.
Sida ay Kalfadhi u sheegeen xubnaha Golaha qaar ka mid ah, waxaa suuragal ah in sida uu sameeyey Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federalka ah ee Soomaaliya uu Aqalka Sare ka doodi doono ammaanka dalka, taas oo ay Xildhibaanadu si fiican ugu talaxtageen bishii hore.